Neodymium Magnet, Samarium Cobalt Magnet, Motor Magnet - Horizon
Precast Kongiri Magineti
Rabha Coated Magnet
Plastic Coated Magineti
Kudzivirirwa & Oiri & Gasi
Maindasitiri & Michina
Kusimudza & Kubata
Imba & Hofisi & Toy
Precast Kongiri Fomu
Yakasvibirira Mutengo Mutengo
Calculator yeFlux Density
Rare Pasi Magnets Specs
Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. inogadzira yakatwasuka inogadzira isingawanzo pasi Neodymium magineti uye ayo akafanana magineti magungano. Nekuda kwedu kusingaenzanisirwe hunyanzvi uye hupfumi ruzivo mune magineti munda, isu tinogona kupa vatengi vane dzakasiyana siyana magineti zvigadzirwa kubva kumakwenzi kusvika kugadzirwa kwakawanda, uye kubatsira vatengi kuwana mutengo unoshanda mhinduro.
Kubata Kwemativi Akaviri…
Magnet Kubata Kit
Colored Hook Magnets
Giredhi 35 SmCo Magnet
Neodymium Tiny Magineti
Servo mota magineti
RoHS uye REACH Inoenderana
Neodymium magineti inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi nemagetsi zvigadzirwa, uye kunyangwe mune zvigadzirwa zvevatengi kana matoyi evana, saka tinotora matanho ekudzora uye nekuvimbisa kuti edu emagetsi zvigadzirwa zvinoenderana neRoHS uye REACH.
Hunhu Kutanga paKukwikwidzana Mutengo
Kubva pane hunhu hwekutanga uzivi, isu tinogara tichigadzirisa dhizaini uye maitiro ekugadzira, uye manejimendi kunatsiridza mutengo wevatengi. Tine chivimbo chekutaura kuti pamhando imwecheteyo mutengo wedu unokwikwidza kupfuura vakwikwidzi.
Yedu yepakati-saizi bhizinesi chikero inogonesa inokurumidza kuratidzira pakati pehukama madhipatimendi uye mhinduro kune vatengi. In-imba yekugadzira kugona uye yakakura kuwanda kweyakajairika magineti magungano inovimbisa ingori-mu-nguva dhirivhari.
Rare pasi Neodymium magineti uye zvine hukama zvakasiyana Neodymium magungano magungano anogadzirwa-mumba. Yedu magnetics hunyanzvi inoita kuti isu titore zvimwe zvakaoma magineti zvigadzirwa kune vatengi kuti vave neumwe-mira kutenga zviri nyore.
fambidzana nenhau dzichangoburwa uye zvinyorwa zvine chekuita nemagineti
NdFeB uye SmCo magnets a Rinoshandiswa Magnetic Pump
Akasimba NdFeB uye SmCo magineti anogona kuburitsa simba rekutyaira zvimwe zvinhu pasina chairo kuonana, maapplication mazhinji anotora mukana weichi chiitiko, kazhinji senge magineti ekubatanidza uyezve magineti akabatanidza mapombi ezvisimbiso-zvishoma zvinoshandiswa. Magnetic drive couplings inopa isiri-yekutaurirana tr ...
5G Circulator uye Isolator SmCo Magnet
5G, yechishanu chizvarwa nharembozha yekutaurirana tekinoroji chizvarwa chitsva chebandaneti bhendi yekutaurirana tekinoroji ine hunhu hwekumhanya, kunonoka kuderera uye kubatanidza kukuru. Iyo network yezvivakwa kuona iyo murume-muchina uye chinhu kubatana. Iyo internet o ...
China Neodymium Magnet Situation uye Prospect
China zvachose magineti zvinhu indasitiri inoita basa rinokosha munyika. Iko hakuna kwete chete mabhizinesi mazhinji ari kuita mukugadzira uye kunyorera, asi zvakare basa rekutsvagisa rave riri mudenga. Zvekusingaperi magineti zvinhu zvinonyanya kuve zvakakamurwa kuita zvisingawanzo pasi magineti, simbi zvachose ...